Ogologo ndụ iPod Nano na Shuffle, Apple kwụsịrị ire ha | Akụkọ akụrụngwa
Ugbu a egwu egwu na-ebugharị bụ ihe a na-ebu na ihe nwere ọdịnihu kachasị dị iche iche nke oriri egwu. Apple malitere ịghọta na ụdị ire ahịa egwu na-ada ogologo oge tupu ya azụọ Beats Music ma mechaa bido Apple Music. Abụọ Apple Music na Spotify na ọrụ egwu egwu ndị ọzọ na-enye anyị ohere ibudata egwu iji kpọọ ya na-enweghị mkpa njikọ Internetntanetị na enweghị ịmekọrịta ngwaọrụ anyị na iTunes iji nwee abụ kachasị amasị anyị. Na ọnọdụ ọhụrụ a iPod Nano na iPod Shuffel enweghị ebe n'ikpeazụ Apple ekpebiela kpamkpam ịhapụ ha ire ere.
Dabere na Apple, ụlọ ọrụ ahụ na-eme ka ụdị iPod dị ugbu a dị mfe site na ịhapụ naanị iPod aka maka ọrịre, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ebe ọ nwere njikọ andntanetị ma nye anyị ohere ibudata egwu kachasị amasị anyị site na ọrụ egwu egwu ọ bụla nke anyị debanyere aha na ya. Na mberede, ụlọ ọrụ ndị Cupertino emelitere ikike nke ngwaọrụ a na-aga na-enye a 32 GB version maka 229 euro na a 128 GB version maka 339 euro.
N'ụzọ dị otú a, ihe nlereanya 16 GB na-apụ n'anya, ihe nlereanya nke adịkwaghị agwụ n'oge na-adịbeghị anya n'ihi enweghị ohere, ọ bụghị naanị maka egwu, kamakwa inwe ike ịchekwa egwuregwu tumadi. Ma iPod Shuffle na iPod Nano enwetabeghị mmelite maka afọ 5, o doro anya na ha ahụbeghị nhọrọ ọ bụla ga-ekwe omume nye ngwaọrụ ndị a na ntụgharị ka ukwuu na-enye ha ohere ijikọ na Internetntanetị ma budata egwu kachasị amasị ha site na ọrụ egwu egwu.
Na mgbakwunye Apple Watch na-enye gị ohere ibudata egwu kachasị amasị gị ma buru ya mgbe anyị na-agba ọsọ na-enweghị na-ebu iPhone na ubu ha, n'ihi ya, ọ bụkwa a ije iji na ọrụ ndị nwere mmasị na-azụ ihe ọ bụla nke ndị a ụdị na-ume ozugbo nweta ihe Apple Watch, ma ọ bụrụ na taa ha erubeghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ogologo ndụ iPod Nano na Shuffle, Apple kwụsịrị ire ha
Adobe mara ọkwa na ọ ga-agbahapụ nkwado Flash na 2020